China Amphibious Undercarriage fekitori uye vanotengesa | Bonovo
An amphibious excavator yakanyatsogadzirirwa kushanda munzvimbo ine hunyoro, nzvimbo nyoro, mvura isina kudzika nenzvimbo dzese dzakapfava dzinokwanisa kuyangarara pamusoro pemvura. BONOVO yakanyatsogadzirwa amphibious pontoon / undercarriage yakaiswa zvakawandisa uye zvinobudirira kubvisa ivhu risine tsvina, kubvisa migero yakasviba, kubvisa huni, swampland uye kushanda kwemvura kushoma uko kwakajairwa neyakajairwa matsva.
NaBONOVO amphibious pontoons / undercarriage, isu tazviratidza isu kune vatengi vane chinobudirira kuita pane zvinotevera nzvimbo:
1) Dutu rinochenesa pamigodhi, masango uye nzvimbo yekuvaka
2) Wetland kudzoreredza uye kumisikidza
3) Kudzivirirwa kwemafashama nekudzivirira
4) Mvura yekutsausa chirongwa
5) Shanduko yesaline-alkali uye yepasi-goho ivhu
6) Kudzika kwemigero, rwizi chiteshi uye rwizi muromo
7) Kucheneswa kweMakungwa, mahombekombe, madziva nenzizi
8) Kuchera migero yemafuta & gasi pombi kuisa nekuisa
9) Kudiridza kwemvura
10) Chivakwa chemamiriro ekunze uye nharaunda nharaunda kugadzirisa
Nyanzvi Inogadzira Amphibious Zvigadzirwa
Iye Spud uye Hydraulic Mechanism akabatanidzwa mune yakavharwa vice pontoon, ayo akaisirwa pamativi ese eamphibious excavator. Iyo hydraulic simba inogona kushandiswa kudzora kudzikamisa kana kusimudza-uye-pasi kumisikidza. Kureba kwayo kunoonekwa nekudzika kwenzvimbo yekushanda. Iwo ma spud anomiswa kana achinge achishanda, obva aiswa mumadhaka ne hydraulic mashini. Iko kushandiswa kwema spuds kunovandudza zvakanyanya kugadzikana kwekushandisa kwemidziyo mumvura.
Iyo Pontoon zvinhu zvakagadzirwa neAH36 ngara yakakosha zvinhu uye 6061T6 aluminium alloy ine yakasimba simba zvinhu. Iyo anti-ngura kurapwa inotora sandblasting uye kupfura-nenyunje tekinoroji, iyo zvinobudirira kugadzirisa hupenyu hwekushandisa.
Inonzwisisika dhizaini dhizaini uye inogumira
element kuongorora pane-saiti inoparadza kuyedza kuve nechokwadi chekutakura kugona uye kuchengetedzeka kwePontoon.
Iyo Pontoon Inokanganisika ndiyo yakasarudzika ficha yeBONOVO Amphibious Undercarriage. Zvinoreva kuti chinhambwe chinogona kuchinjika otomatiki pakati pemapontoon maviri mune imwe nhanho. Matanda ane hydraulic control system, ari nyore kushanda pamwe nekuchengetedza kwakanyanya. Munguva yekuvaka uchishanda, kana paine nzvimbo yakamanikana yekushanda, mapontoons ari-pakati penzvimbo anogona kuderedzwa panguva yekushanda. Nebasa renzvimbo yekugadzirisa, tinogona kubatsira kusimudzira chassis kugadzikana uye kugadzirisa basa kugona kwevatengi.
Mushure meketani ichishandiswa kwenguva yakati rebei, huni inowedzera nekuda kwekupfeka kwepini bushing, zvinozoita kuti cheni yese iwedzere uye zvichizokonzera kudonhedza ngetani kana kutsvedza kana uchifamba. Ichakanganisa zvakanyanya mashandiro. Iyo tensioning chishandiso inogona kuve nechokwadi checheni pini uye kutyaira giya mazino akabatanidzwa nemazvo nekugadzirisa chinzvimbo che sprocket. Iyo bhaudhi inosimbisa ndeye yakajairwa kumisikidzwa kwepontoon yedu. Cylinder kuomesa kuri nyore pane kusimbisa bhaudhi, iyo inogona kuita gadziriro yekugadzirisa uye kuona kufamba kwakadzikama uye kwakanaka.
Nzvimbo yevhu inochenesa kumigodhi, masango uye nzvimbo yekuvaka Kudzoreredza kwemvura uye kudzoreredza
Kudzivirirwa kwemafashama uye kudzora chirongwa chekuchinja mvura
Kuchera migero yemafuta & gasi pombi kuisa uye kuisa Mvura
Imba yekuvakwa uye kugadzirisa zvakasikwa nharaunda
20T Amphibious Excavator Paramende
Pashure: S DZAKATEVEDZANA
Zvadaro: Tevera Bolts Uye Nuts
Excavator undercarriage yekutengesa
excavator undercarriage zvikamu
Excavator undercarriage zvikamu vatengesi
hitachi undercarriage zvikamu
mini yekuchera undercarriage
undercarriage excavator zvikamu